Ukuvakasha Kwefektri - Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.
Imboni yethu itholakala eZhejiang China.The indawo enhle futhi indawo ekahle Airport.With abasebenzi bethu lochwepheshe kanye nentambo ukukhiqizwa, okwenza sikwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho imikhiqizo.
IHuaxiajie ingumkhiqizi okhethekile wamaphaneli odonga nophahla we-PVC, ukubunjwa kogwebu lwe-PVC, amaphrofayli e-PVC / WPC nokuhlobisa ingaphandle kwe-PVC / WPC. Imikhiqizo yethu inobungani bemvelo.
Uma unikezwa ithuba nendawo egcwele, sizokukhombisa zonke izinzuzo zethu futhi sikhule ndawonye. Nginesiqiniseko sokuthi singasungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside nobungane nenkampani yakho ehlonishwayo ngenxa yokwethemba kwakho nensizakalo yethu enhle kakhulu.
Sihlala njalo sifuna ukubambisana okuqotho nokuhlangene namakhasimende emhlabeni jikelele. Singaba abahlinzeki bakho abahamba phambili abanemikhiqizo ebanzi enhlobonhlobo yemikhiqizo.
Nge ukukhula ezimakethe isikhunta, R & D umnyango inkampani yethu ungumnikazi onjiniyela professional ukugxila asathuthuka imikhiqizo.Umnyango we-R & D awamukeli kuphela amaphrojekthi we-OEM, kepha futhi ungathatha amaphrojekthi we-ODM.Ngomklami omuhle kakhulu, sizokwenza imikhiqizo yepaneli yodonga ephelele ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende nemakethe ngokuzayo.